Somaliland oo war culus kasoo saartay qabashada bandhig faneedyada kadib markii….
July 31, 2020 Mahad Jama 3
HARGEYSA(P-TIMES)- Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa ka hadlay bandhiga faneedyada ama showyada ay fanaaniintu ay ku qabtaan magaalada Hargeysa iyo degaanada kale ee Somaliland ayaa sheegay in ay mamnuuc yihiin bandhigisyadaasi.
Wasiirka oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in bilihii lasoo dhaafay ay yaraadeen bandhig faneedyada, waxaana uu mamnuucay in bandhig faneedyo lagu qabto maalmaha ciida magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee Somaliland.
Waxa uu sheegay in sababaha ay u joojiyeen bandhig faneedyada ay tahay in ay ka hor imaanayaan dhaqanka suuban ee Islaamka iyo sidii looga hortagi lahaa cudurka Coronavirus oo kiisas kamid ah laga helay deegaanada Somaliland maadaama dadyow fara badan ay iskugu imaanayaan.
Wasiirka ayaa waxa uu amray ciidamada Booliska Somaliland inay ka hortagaan bandhig faneedyada lagu qabto magaalada Hargeysa iyo dsegaannada kaleba si loo ilaaliyo caafimaadka dadka.
Deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah ayaa waxaa maalmaha ciida fanaaniinta Soomaaliyeed ay ku qabtaan bandhig faneedyo, iyada oo dadka ay ku daawadaan lacago kala duwan halka meelaha bandhig faneedyada lagu qabanayo ay iskugu yimaadaan dad badan.
War dadka u daaya in ay heesaan,war qaadkii baad fasaxdeen oo druugo cagaaran oo cudur sida ah.
Maamulada qabaa’ilka ee Soomaaliya ka jira maantay,waxa ay u xuub siibteen hab kalitalisnimo oo la iska dhigayo in la
ilaalinayo anshaxa iyo dhaqanka,ugow in iska kuwaasi ay musumaasuqa iyo boobka hantida dadwaynaha ay howshoido tahay.
Wasiiirku , waa Alshabaab . dadka iyo heesahooda ma xukumo shaqo u taalana ma aha oo qof iska hadlay.
Magaalada ugu qaad cunka badan ugu dhilooyinka & anshax xumida badan Soomaliya waa Xamar , Muuq disho. Xamar marka hore ha laga mamnuuco qaadka & dhaqan xumida.